प्रदुषणमा रुघाखोकीले नै लिनसक्छ ज्यान– ‘चिसो नखानू, धुमपान नगर्नू’ चौतर्फी देखिएको प्रदुषणले श्वासप्रश्वास प्रणालीमा मात्र नभई छालामा समेत विभिन्न समस्या निम्त्याइदिनसक्छ। यस्ता कुरामा लापरबाही बढ्यो भने समस्या क्रोनिक भएर मिर्गाैला, मुटुजस्ता शरीरका महत्वपूर्ण अंगमासमेत ठूलै समस्या निम्तिन सक्छ। आयोमेल संवाददाता
शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालका प्रमुख कन्सल्टेन्ट डा. अनुप बाँस्तोला साउथ एसिएन भेरिएन्टलाई लगाइएको भ्याक्सिनले कम काम गर्ने कुरा बाहिरिएको बताउँछन्। आयोमेल संवाददाता
घुर्नुहुन्छ? समस्या मात्रै होइन, रोग पनि हुनसक्छ
सास फेर्दा हावा स्वतन्त्र रुपमा चल्न पाएन भने मानिस घुर्न थाल्छ। विभिन्न अध्ययन, अनुसन्धानले देखाएअनुसार १० देखि ३० प्रतिशत मानिसमा घुर्ने समस्या पाइएको छ। डा. योगेश न्यौपाने
बच्चाको दिमाग कसरी तेजिलो बनाउने?
बालापन निकै प्यारो र अबोध हुन्छ। बालापन सबैलाई जीवनभर प्रिय लाग्नेगर्छ। राम्रो बानिको विकास गर्ने, इम्युनिटी पावर बढाउने र धेरै कुरा सिक्ने उमेर पनि यही हो। आयोमेल संवाददाता
पत्थरी भइसकेपछि बेलैमा उपचार गर्नुपर्छ। मलाई दुख्दैन भनेर बेवास्ता गर्नु हुँदैन। ढिलोगरी उपचार गर्न आउँदा त्यतिबेलासम्म मिर्गौला बिग्रिसकेको हुनसक्छ। डा. पवनराज चालिसे
गाँजा सेवनको तुच्छ आनन्द
मकहाँ डिप्रेसनग्रस्त भएर आउने युवामध्ये ९० प्रतिशत गाँजा-भाङ सेवनकर्ता हुन्छन्। अन्य कारणले आएका भन्दा उनीहरूलाई निको बनाउन मलाई गाह्रो हुने गरेको छ। गाँजा सेवन गर्दा भ्रम पैदा हुन्छ। मानसिक समस्या हुन्छ। मानिस भुल्ने हुन्छ। यसमा सिएससी र सिबिबी भन्ने तत्व हुन्छन्। त्यसले अलिअलि आनन्द दिएजस्तो गर्ने हो। स्वामी आनन्द विनोद
धेरै मानिसको बिहान उठ्ने बित्तिकै चिया पिउने बानी हुन्छ। तर, स्वास्थ्यका लागि यो बाँनी राम्रो होइन। तपाई पनि आफ्नो दिनको सुरुवात चियाबाट गर्नुहुन्छ भने त्यो बाँनी छोड्नुस्। खाली पेट चिया पिउँदा शरीरलाई घाटा पुग्छ। आयोमेल संवाददाता
सम्बन्ध सुमधुर बनाउन अपनाउनुस् यस्ता 'टिप्स'
एकअर्काका कमजोरी खोज्नु हुँदैन। सम्बन्धमा शंका गर्नु हुँदैन। यसले पार्टनरबीच असहमति बढ्दै जान्छ। शंका र कमजोरी खोज्ने बानीले सम्बन्ध भताभुंग गरिदिनसक्छ। यसले सम्बन्ध मात्र बिगार्दैन, एकअर्काको चियोचर्चो गर्दैमा धेरै समय बित्नसक्छ। आयोमेल संवाददाता
मानिसको शरीरमा भएको रोग प्रतिक्रिया प्रणालीले कुनै पनि नयाँ कुरा प्रवेश हुनासाथ तत्कालै त्यसको प्रभाव देखाउँछ, जसलाई ‘अक्वायर्ड रियाक्सन’ भनिन्छ। यसरी देखिने प्रतिक्रिया मानिसको शारीरिक संरचनाअनुसार फरक–फरक हुन्छ । पुष्पराज चाैलागाईं
पतञ्जलीले कोरोनाको औषधि सार्वजनिक गरेको छ। योगगुरु रामदेव तथा केन्द्रीय स्वास्थ्य मन्त्री डा.हर्षवर्द्धन र मन्त्री नितिन गड्करीले संयुक्त रुपमा पतञ्जलीले विकास गरेको कोरोनाको औषधि कोरोनिल सार्वजनिक गरेका हुन्। आयोमेल संवाददाता
… अनि काेराेना र टेकु अस्पतालका स्तम्भ बने डा. सागर राजभण्डारी
नेपालमा पहिलो पटक २०७६ माघ ९ मा कोरोना संक्रमण पुष्टि भयो। त्यसको एक महिनापछि फागुन १९ गते राष्ट्रिय क्षयरोग केन्द्रबाट डा.सागर राजभण्डारी निर्देशक भएर शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरूवा रोग अस्पतालमा सरुवा भए। उनी अस्पतालमा आउँदा नेपालमा कोरोना महामारीको चर्चा चलिरहेको थियो तर, संक्रमित भने फेला परेका थिएनन्। मानिसमा नयाँ रोगप्रति त्रास थियो पुष्पराज चाैलागाईं
गहिरो श्वास लिँदा ‘डिप्रेसन’ देखि मुटु रोगीलाई फाइदा
आजभोलि मानिसको जीवनशैली निकै व्यस्त छ। व्यस्त जीवनशैलीले मानिसमा थुप्रै शारीरिक समस्या हुनथालेका छन्। यस्तो व्यस्त जीवनशैलीमा थोरै समय निकालेर व्यायम गर्नु स्वास्थ्यका लागि निकै लाभदायक हुन्छ। आयोमेल संवाददाता
भारतमा यो खोप लगाउँदा गम्भीरखालको घटना अहिलेसम्म देखिएको छैन। त्यसैले खोपको विश्वसनियतामा शंका गर्नुपर्ने अवस्था छैन। त्यस्ता बेला औषधीले नभई कुनै अन्य कारणले पनि मृत्यु भएको हुनसक्छ। यस खोपको गम्भीर खालको ‘साइड इफेक्ट’ छैन। डा. बासुदेव पाण्डे
एकातिर भ्याक्सिन, अर्कातिर कोरोनाको नयाँ प्रजाति : फेरि अर्को कहर बन्ला २०२१?
‘२०२१ मा पहिलेको जस्तो सहज स्थिति त आउँदैन तर २०२० भन्दा धेरै कम हुन्छ, किनभने मानिसले आफूलाई कसरी बचाउने भन्ने कुरा सिकिसके भने रोगसँग लड्ने क्षमताको पनि विकास हुँदै जान्छ,’ डाक्टर पाण्डे भन्छन्। अनिता श्रेष्ठ
के कन्डमको डेट एक्सपायर हुन्छ?
सुरक्षित यौन सम्पर्क तथा नचाहेको गर्भ रोक्नका लागि कन्डमको प्रयोग निकै आवश्यक हुन्छ। कन्डमसँग जोडिएका थुप्रै जानकारीहरू छन्। जुन मानिसले थाहा पाइरहेका हुँदैनन्। तर, जान्न निकै जरुरी हुन्छ। आयोमेल संवाददाता
शरीरका बेकार तत्वलाई बाहिर फाल्न हरियो प्याजले सहयोग गर्नसक्छ। किनकी यसमा एन्टीअक्सिडेन्टस र अल्फर भरपुर हुन्छ। र, यसले विषाक्त तत्वलाई खत्तम गर्ने एन्जाइमलाई सक्रिय गरिदिन्छ। हरियो प्याजको सेवनले कोलेस्ट्र कम हुन्छ। यसको सेवनले हर्टअट्याक र स्ट्रोकको जोखिम पनि कम हुन्छ। त्यसैले हामीले हाम्रो खानामा हरियो प्याजको प्रयोग गर्नु राम्रो मानिन्छ। आयोमेल संवाददाता
मासुजन्य पदार्थ त्याग्न उत्सुक व्यक्तिहरूको अर्काे चिन्ताको विषय भनेको शाकाहारी खुराकबाट पर्याप्त प्रोटिन पाइन्छ कि पाइँदैन भन्ने पनि हो। तरकारी तथा फलफूलमा त्यति धेरै पौष्टिक तत्व नपाइए पनि टोङले यो चिन्ताको विषय नभएको बताइन्। आयोमेल संवाददाता